Dagaal ka dhacay Gaalkacyo iyo Wararkii ugu dambeeyay | Keydmedia
Dagaal ka dhacay Gaalkacyo iyo Wararkii ugu dambeeyay
Dadka degaanka ayaa sheegay in dagaalka uu qarxay kadib markii Ciidamada maamulka Puntland ay weerar ku qaadeen Malleeshiyaad hubeysan, oo isku aruursanayay xaafadda Garsoor.
GAALKACYO, Soomaaliya - Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxay dagaal xooggan oo khasaarooyin kala duwan geystay, oo xalay ka dhacay waqooyiga magaaladda Gaalkacyo, oo hoostaga maamulka Puntland.
Qof kamid ah dadka degaanka oo la hadlay Keydmedia Online, ayaa sheegay in iska horimaadka uu soo gaarey illaa saakay oo Sabti ah, iyadoo dhinacyada wali ay isku hor-fadhiyaan goobihii ay ku dagaalameen, waxaana socda dedaallo lagu joojinayo dagaalka.
"Ciidanka Puntland ayaa xalay fiidkii weerar ku qaaday fariisimo Malleeshiyaadka hubeysan ay ku leeyihiin agagaarka Cagaarweyne ee Xaafadda Garsoor ee Gaalkacyo, waxaana taaso horseeday dagaal la isku adeegsaday hubka culus iyo kan fudud," ayuu yiri Goobjoogaha.
Khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay colaadda, waxaana la xaqiijiyay in Afar ruux oo dhinyacyada ah dagaalamay ah ay ku geeriyoodeen goobta, halka dad kale oo shacab ah ay dhaawacyo kasoo gaareen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Ciidamada Puntland ay la wareegeen goobta ay weerarka ku qaadeen, oo la sheegay inay ahayd meel lagu iibiyo maandooriyaha, sida qamriga iyo xashiiska, iyadoo kuwii ka ganacsanayay qaarkood xabsiga la dhigay.
Dagaalka Gaalkacyo ayaa kusoo beegmaya xili maanta Madaxda maamullada Puntland iyo Galmudug ay Shir uga qeybgalayaan magaaladda Dhuusamareeb, ee xarunta gobolka Galgaduud.